ओलीले ल्याको प्रतिगमनकारी देउवाले ल्याको अग्रगमनकारी | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, भदौ ६, २०७८ मा प्रकाशित
भिरघरे भतिज ! यसपालि सारै राम्रो अग्रगमनकारी, अत्यान्तै प्रगतिशील, पार्टीहर्लाई एकताबद्ध गर्ने अध्यादेश आयो । फेरि कस्तो राम्रो छ भने २१ दिन भित्र पार्टी परिवर्तन गरे पद थमौति हुने अरे । ओलीले ल्याको अध्यादेश, गनाउथ्यो भने देउवाले ल्याको वास्ना आउँछ भनेर प्रचण्ड काम्रेडले भाषणमै भन्दिए । त्यसो भन्दा हाम्रो माओवादीको केटाहर्ले त परss ताली लगायो ।
हो विध्वसें काका ठिक भन्यौ । यो प्रचण्डको ‘आइडिया’ मान्नैपर्छ क्या ! हाम्रो देउवा दाइ त अहिले ‘रवर स्टेम्प’ मात्रै भएका छन् । अब माधव नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ ? अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा छ वटा मुद्दा परेको छ भन्दै छन् । त्यो के हुन्छ ? अनि २१ दिनको म्याद दिएर एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने ‘दल बदलु’ लाई छुट दिएको म्याद सकिएपछि हाम्रो देउवा दाइले मन्त्री परिषद् विस्तार गरेर राज्य हाँक्ने हुनन् ।
नमस्कार है काका र दाइलाई । म त आम्दा आम्दै ढिला पो भयो । के कुरो हुँदैछ कुन्नि !
के कुरो हुन्छ हौ सण्डे । माधवको पार्टी पनि ठूलै बन्ने भयो । तँ अब माधवलाई नछोड है ! पार्टी नफुटुन्जेल माधवतिर लाग्ने पार्टी फुटेपछि ओलीतिर जाने । तेरो त उल्टो पारा पो भयो । अब हाम्रो प्रचण्डले माओवादी, नेपाली कांग्रेस, राजपा, जनमोर्चा, राप्रपा जस्ता क्रान्तिकारी, अग्रगमनकारी, प्रगतिशील शक्तिलाई एकीकृत बनाएर चुनावमा जाने घोषणा गरी सके । तँ माधवतिर आइजो । यहाँ माधवको कोही भएन !
हौ काका ! सण्डेले ठूलो कुरा ग¥यो भनौला । माधव नेपालको अरु जिल्लामा पनि छैन । उनलाई अस्तिसम्म साथ दिने पूर्व झापामा नरेश खरेल, रविन कोइरालादेखि सुदुरपश्चिमका जैसी, जोशी र भट्टले समेत साथ छाडे । डोल्पाका धनबहादुर बुढा भन कि संखुवासभाका पर्शु मेघी गुरुङ भन कोही पनि माधवसंग छैनन् । माधवको उद्देश्य नेकपा एमाले फुटाएर प्रचण्डसंग मिसाउने हो भनेर सप्पैले बुझेका छन् ।
सण्डेले ठिक कुरा ग¥यो है काका ! वास्तवमा माधव नेपाललाई २०% प्रतिशत पु¥याउन पनि गाह्रो छ । पहिला माधव संगै भएको केन्द्रीय सदस्य पनि १९ कि २० जना हामी होइन है भन्नेमा पुगे अरे । अब प्रचण्डले सातवटा पार्टी मिलेर चुनाप नै लडेर ओलीको पार्टीलाई हराउनु पर्छ भनेका छन् । के–को सातोटा पार्टी भिडन्त जे जे भने पनि प्रतिस्पर्धा भने पनि काँग्रेस र एमाले कै हो । तिमार्को माओवादीलाई हाम्रो काँग्रेसले वैतर्नी तार्नुपर्छ भन्ने छैन ।
यो भिरघरे पनि कस्तो झोंक चल्ने कुरा गर्छ । माधव नेपाल आएपछि सपभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी नै हुन्छ । एमाले, सूर्य चिन्ह, जबज भनेर त कोही बस्तैन । हाम्रो प्रचण्डले देउवालाई त क्रान्तिकारी, प्रगतिशिल, अग्रगामी बनाई सके । अब माधवसंग मिलेर उच्च छलाङ मारेपछि एमालेका धेरै जसो गुटुङटुङ प्रचण्डतिर । छोड्दे भिरघरे यो कुरो । निर्वाचन आयोगले नमानेपछि माधवको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी भयो अरे ।
हौ विध्वसें काका । अदालत जिउँदै छ, केही समय अघिको फैसलाको मसी सुकेकै छैन । अब केही दिन पर्खनु पर्छ । काठमाडौको बागमतीमा माछैमाछा छ भनेर प्रचण्डले भनेपछि देउवाले जाल हाने । भरे जालमा फोहोर मात्रै आयो भने दोष कसलाई दिने ? अध्यादेश अहिले त्यस्तै भएको छ ।
वाइयात कुरो नगर । हामीले सप्पै जानेको छ । ऋषि कट्टेललाई मुद्दा जिताउने बाहेक अरु फैसलाहरु हाम्रो प्रचण्डको इच्छा अनुसार भाको छ । माधव नेपालहर्को पद पनि जादैन । सभामुख नै हाम्रो अग्नी काम्रेड भएपछि ढुक्क भए हुन्छ ।
खै हौ काका ! हाम्रो काँग्रेसलाई नै प्रचण्ड ले थाङ्नामा सुताई सके । देउवा दाइ उस्तै । ओलीले यही अध्यादेश ल्याउँदा वक्तव्य नै निकालेर चर्को विरोध गरे । अहिले प्रचण्डको लहैलहैमा लागेर त्यही अध्यादेश ल्याए । अनि त्यतिखेरको नागरिक समाज अहिले कता गयो को नि ।
हाम्रो महान राष्ट्रनायक, सर्वहारा वर्गका सर्वमान्य नेता १७ हजार जनताका दुखी आत्मालाई उद्धार गर्ने मुक्तिदाता काम्रेड प्रचण्डले ओलीले ल्याको हुनाले त्यो अध्यादेश प्रतिगमामी देउवाले ल्याउदा अग्रभागी भयो भनेर ब्याख्या गरेका छन् । हाम्रो जननेताले भनेपछि सकियो, लालमोर लाग्यो भनेर बुझ्नु पर्छ
यी बुढा पनि हरेक कुरा गर्दछन् ! माधवलाई एमालेबाट लुछेर चिउरा मिल्काए जस्तो मिल्काएपछि माधव अग्रगामी बने अरे । हरे कस्तो बुद्धि ! हेर सण्डे तैंले ठिक गरिस् । माधवतिर अब कोही पनि वस्तैन । प्रचण्ड क्रान्तिकारी, माधव अग्रगामी, देउवा प्रगतिशील, बाबुराम राष्ट्रवादी उपेन्द्र एकताका पक्षपाति भनेर व्याख्या आउन थालेको छ । प्रचण्डले भनेपछि अस्ति प्रतिगामी भाको अध्यादेश आज अग्रगामी हुन्छ ? प्रचण्डको के ठेगान यिनले त ‘महिलाको अस्मिता जोगाउन बाध्यभएर बलात्कार गरेँ’ समेत भन्न सक्छन् ।
यो झुम्री पनि नचाहिने कुरा गर्छे । तेरो ओली माओवादी विरोधी भको हुनाले उसले गरेका काम प्रतिगामी हो । हामीले भने अनुसार काम गरेको हुनाले देउवाले गरेको काम अग्रगामी र प्रगतिशील हो । यति कुरो बुझ्नु छैन । कि कसो सण्डे काका ?
तिम्रो कुरो चैं होइन काका ! अब पनि नेपाली राजनीतिमा ओली र देउवा नै हो । देउवाको नेतृत्वमा सबै पार्टी एकतिर एमाले एकतिर भएर चुनापमा लड्छन् ।
ए… सण्डे ! यस्ता कुरा नगर भाई ! चुनापमा कसैले कसैको ठेक्का लिदैन । प्रचण्ड र माधव खलकलाई जिताउन हाम्रो कांग्रेसले ठेक्का लिनु पर्ने ? यो हुन सक्तैन । कम्युनिष्टहरु मिल्न सक्तैनन् भने कांग्रेसलाई चाहिँ यिनार्ले बाँकी राख्छन् ? अब हाम्रो उभिण्डे र झापाको अधुवा खोलामा धेरै पानी बगी सक्या छ । यस्ता कुरा मलाई मन पर्दैन । म लागें घर तिर ।